मेलबटलर: अन्तमा, एप्पल मेलका लागि एक सहायक जो हल्लाउँछ! | Martech Zone
मेलबटलर: अन्तमा, एप्पल मेलका लागि एक सहायक जो हल्लाउँछ!
बुधबार, अक्टोबर 12, 2016 बुधबार, अक्टोबर 12, 2016 Douglas Karr
जब म यो लेख्छु, म अहिले मेलमा छु नरक। मसँग १,०११ नपढेका ईमेलहरू छन् र मेरो गैर-प्रतिक्रिया सामाजिक मिडिया, फोन कलहरू, र पाठ सन्देशहरू मार्फत सिधा सन्देशहरूमा चालु छ। म लगभग १०० ईमेलहरू पठाउँछु र लगभग २०० ईमेलहरू हरेक दिन प्राप्त गर्दछु। र त्यो मलाई मनपर्ने न्यूजलेटरहरूको सदस्यता समावेश गर्दैन। मेरो इनबक्स नियन्त्रण बाहिर छ र इनबक्स शून्य मेरो लागि गुलाबी डायनासोर जत्तिकै वास्तविक छ।
मैले सहयोगको लागि एक धेरै उपकरणहरू वितरण गरेको छु र म सँधै निराश छु, ती सबै टास गर्दै र एप्पल मेलमा फर्कदै जसको झण्डा, फिल्टर, र वीआईपी सूची औंलाहरू हुन् जुन मैले बाँधलाई जोड्न प्रयोग गर्दछु। यद्यपि यो पर्याप्त छैन। म अझै निराश छु। म अनुरोधहरूको वेभलाई राम्रोसँग प्रबन्ध गर्न चाहन्छु। र मलाई थाहा छ हरेक केहि सय ईमेलको लागि, त्यहाँ जोडीमा जहिले पनि अवसरको एक टुक्रा हुन्छ जुन म माथि हुनुपर्दछ।
करीव एक हप्ता अघि, थडियस रेक्स, ए ब्रान्ड विशेषज्ञ त्यो ग्राहकहरूसँग हामीसँग कार्य गर्दछ जसले मेरो इनबक्सको अगाडि खुल्लम खुल्ला रुँदै मलाई साक्षी गरेको वा नगरेको हुन सक्छ, मलाई जानकारी दिनुहोस् मेलबटलर। धेरै तेस्रो पक्ष प्लेटफर्महरू जस्तो छैन कि तपाईंको इनबक्सको निरीक्षण गर्दछ वा लिन्छ, मेलबटलर एक एड-अन हो जुन एप्पल मेलको साथ निर्बाध एकीकृत गर्दछ। यो यति राम्रो छ कि एप्पलले वास्तवमै केवल यस कम्पनीलाई स्नैप गर्नुपर्दछ र यी सुविधाहरू पूर्वनिर्धारित रूपमा थप्नु पर्छ।
स्नुज गर्नुहोस् - ईमेल स्नुज गरेर तपाईंले अस्थायी रूपमा यसलाई तपाईंको इनबक्सबाट हराउनुहुनेछ।
ट्रयाकिङ् - यदि तपाईंलाई प्राप्तकर्ताले वास्तवमै तपाईंको ईमेल खोल्यो भने तपाईंलाई जानकारी दिनुहोस्। यो एक व्यवसायिक विकास पेशेवरहरु को लागी एक शानदार उपकरण हो यदि कुनै सम्भावनाले आफ्नो परिचय वा प्रस्ताव ईमेल खोल्दछ भने।
समय तालिका - तपाईंको ईमेलहरू भविष्यमा एक निर्दिष्ट मिति र समयमा पठाउन अनुसूचित गर्नुहोस्।
अन्डु पठाउनुहोस् - केहि समयको लागि तपाईं ईमेल पठाउनेलाई अन्डु गर्न सक्नुहुनेछ र सम्भावित गल्तीहरू सच्याउन सक्नुहुन्छ।
हस्ताक्षर - तिनीहरूको विभिन्न टेम्पलेटहरू बीच चयन गरेर सुन्दर ईमेल हस्ताक्षरहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
क्लाउड अपलोड - मेलबटलरले स्वचालित रूपमा क्लाउडमा ठूला फाइल संलग्नहरू अपलोड गर्दछ र सट्टामा तपाईंको सन्देशमा सम्बन्धित लिंकहरू थप गर्दछ।
अनुलग्नक अनुस्मारक - सन्देशमा फाईल फेरि संलग्न गर्न कहिल्यै नबिर्सनुहोस् जुन तपाईंले सन्देश पाठमा उल्लेख गर्नुभयो।
अवतार छविहरू - मेलबटलरको साथ ईमेलको प्रेषकलाई उनीहरूको रंगीन अवतार छवि द्वारा सजिलैसँग भेट्न सकिन्छ।
प्रत्यक्ष इनबक्स - तपाईको प्राय: जसो प्रयोग हुने मेलबक्सहरू सिधै मेनू पट्टीबाट पहुँच गर्नुहोस् - जहाँबाट कहिँ क्लिक गर्नुहोस्
इमोजिस - ती आकर्षक साना आइकनहरू जुन आधुनिक संचारको हिस्सा हो ... अब ईमेलमा पनि।
सदस्यता खारेज - मेलबटलरले अनावश्यक न्यूजलेटर्सबाट सदस्यता रद्द गर्नु भन्दा पहिले सजिलो बनाउँदछ: एक क्लिक!
यहाँ कती सरल को एक शट छमेलबटलर तालिकाबद्ध कार्य गर्दछ। मलाई मनपर्ने सुविधाहरूमध्ये एउटा हो यो मेरो अन्तिम सेटिंग्सको प्रबन्ध गर्दछ - त्यसैले मसँग छ अर्को व्यवसाय दिन बिहान :8:०० बजे। यो महान् छ किनभने म मानिसहरूलाई साँच्चिकै ख्याल राख्दिन कि मैले उनीहरूको ईमेलमा प्रतिक्रिया गर्दैछु 2:48 बिहान, हे।
मेलबटलर आगामी सुविधाहरू
कार्य - तपाईका ईमेलहरूलाई गर्नका लागि आईटमको रूपमा चिन्ह लगाउनुहोस् र महत्वपूर्ण कार्यहरू फेरि कहिले पनि बिर्सनुहुन्न।
इनबक्स ब्रेक - एक विश्राम गर्नुहोस्, मेलबटलर छ: स्वचालित रूपमा तपाईको कामका घण्टाको आधारमा केहि ईमेल खाताहरू असक्षम गर्नुहोस्।
बोली अन्य अनुप्रयोग वा सेवाहरूमा ईमेल सन्देशबाट उद्धरण द्रुत रूपमा साझेदारी गर्नुहोस्।
Giphy - मेलबटलरको साथ तपाईंसँग ट्राजिलियन एनिमेटेड छविहरूको सीधा पहुँच छ आफैलाई अभिव्यक्त गर्न।
नि: शुल्क मेलबटलर स्थापना गर्नुहोस्!
म बिल्कुलै उत्साहित छु मेलबटलर छ इनबक्स ब्रेक विकास अन्तर्गत सुविधा। धेरै चोटि हामी क्लाइन्टहरूबाट लेट रिट ईमेलहरू प्राप्त गर्दछौं जुन अनुरोधहरूमा हामी जम्पमा जान्दछौं। यो त्यस्तो होइन कि हामी उत्तरदायी हुन चाहँदैनौं, तर हामी आफ्ना ग्राहकहरूलाई तालिम दिइरहेका छौं कि तिनीहरू दिन वा रातको कुनै पनि समयमा व्यावहारिक रूपमा हामीसँग सम्पर्कमा रहन सक्दछन् ... महान अभ्यास होइन किनभने हामी समर्थन विभाग होइनौं। म बरु निम्न व्यवसाय दिन सम्म ईमेलहरू प्राप्त गर्न रोक्छु। हाम्रो ग्राहकहरू जुन आपतकालिन हुन सक्छ हामीलाई सँधै कल गर्न सक्दछ।
खुलासा: म पोष्टमा मेरो रेफरल लिंक प्रयोग गर्दैछु यस आशामा कि तपाईंहरू मध्ये एक दर्जन यो स्थापना गर्नुहुन्छ र सेवाको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ र म यसलाई नि: शुल्क लिन सक्दछु! 🙂
टैग: स्याउ मेलस्याउ मेल बादलएप्पल मेल इमोजिसएप्पल मेल तालिकाएप्पल मेल ट्र्याकिंगएप्पल मेल सदस्यता रद्दईमेलइनबक्स शून्यमेलमेलबटलर
1WorldSync: विश्वस्त उत्पाद जानकारी र डाटा प्रबंधन
AdCat: पूर्वावलोकन, संगठित, सम्पादन र तपाईंको सामाजिक मीडिया विज्ञापन छवि अनुकूलन